Banyere Anyị - 10TURNTABLES
> Gbasara Anyị
Ekpe: Amazon Mgbakwunye Mmemme
Kpọtụrụ Info: Ị nwere ike iru anyị na iji Kpọtụrụ ụdị.
ALL BANYERE 10TURNTABLES
Dị ka ị pụrụ ịhụ, e nwere a nnukwu iche iche nke turntables ke ahịa, ebay ma ọ bụ na amazon. Ma olee otú ị bulie si dị otú ahụ a dịgasị iche iche nke ngwaahịa? Nke ahụ bụ nnukwu ajụjụ. Ọtụtụ ndị na-aga na n'ùkwù ahịa na-amaghị otú bulie ihe ha na-amasị na ihe suut ha.
Turntable.com awade a sara mbara ihe ọmụma na ọmụma nke mere na i nwere ike ịhụ a turntable na suut gị ihe kasị mma. E nwere okwu nke "Ekike onwe gị na bụ nke kasị mkpa, dị ka ị na-ahọrọ a onye na mpụ."
E nwere ihe anọ dị iche iche nke turntable gị akwụkwọ na m isi ebumnobi bụ inyere ndị mmadụ aka ha kpebie ihe ha na-amasị na naanị na-enye credible isi iyi nke ihe ọmụma. Tupu ị bulie a turntable nke dị iche iche ụdị, mbụ ị mkpa ịghọta ha ọrụ ma na ha mma.